I-Leica Geosystems ibonelela ngesixhobo esitsha sokufaka idatha ye-topographic-iGeofumadas
Epreli, 2019 GPS / Izixhobo, Topography
Heerbrugg, eSwitzerland, APRIL 10 2019 - Leica Geosystems, inxalenye Hexagon, namhlanje wavakalisa ukusungulwa isixhobo esitsha ukufaka iinkqubo, ucikizeko noyilo; Leica Icon iCT30 ukunika ukusebenza ngaphezulu kwishishini lokwakha.
Isixhobo se-iCON iCT30, esidityaniswe nesoftware yeLeica iCON yokwakha, sisisombululo esisebenziseka lula nesinokufikeleleka sonyusa imveliso ngokunciphisa ixesha lokusebenza kunye neempazamo, ngelixa uququzelela amanqanaba aphambili okulandeleka kolwazi. I-IX30 entsha sisixhobo esigxile kumsebenzisi esenza iinkqubo zokubamba idatha kunye nokubamba inkqubo kwinkqubo yokwakha.
"I Leica Icon iCT30 yenzelwe abasebenzisi kufuneka inokuzitshintsha ukuhlola nokwakha eqhelekileyo iindlela de ugqitywe ezenzekelayo. I-hardware ne-software kulula ukuyisebenzisa, "watsho Shane O'Regan, ingcaphephe iimveliso Leica icon Leica Geosystems. "Isixhobo esitsha yinxalenye yephothifoliyo ye Icon ukwakhiwa kwezakhiwo iqukwe software icon ilungiselelwe ngokukodwa ukwenzela ukwakhiwa, ngokubonelela ukusetyenziswa ngokupheleleyo imifuziselo ezinikezelwa ngokupheleleyo format .IFC."
Izixhobo zijoliswe kwimveliso enkulu.
Ukusebenza komda kulula, ukuchaneka okuthembekileyo, kunye nokusebenza komntu omnye zezinye zeempawu ezibonakalayo ze-iCT30. Sisixhobo esikhawulezayo nesomeleleyo esinokusebenza namaxesha amade okuzimela kwamandla, sikwazi ukusebenza phantsi kweemeko ezinzima zesiza, ezinje ngokubonisa, ukuphazamiseka kwendlela yokubona okanye ukuxinana. Nge-iCT30, abaqhubi baya kufaka amanqaku ngakumbi ngemini, ukukhawulezisa inkqubo yokwakha exhomekeke kwiziphumo zophando.
I-Leica ICON iCT30 entsha iya kuqaliswa kwi-BAUMA eMunich, eJamani. Ukubonakalisa okubonakalayo, tyelela iHexagon kwiHolo le-A2, Yima 137.
Ukufumana ulwazi olungakumbi malunga nechungechunge olutsha lwezixhobo zokwakha, tyelela https://leica-geosystems.com/en-GB/products/construction-tps-and-gnss/leica-icon-ict-30
Leica Geosystems - xa kufanelekile
I-hexagon iyinkokeli yehlabathi kwiisombululo zedijithali ezenza izilwanyana ezixhaseneyo (i-ACEs). I-hexagon (i-Nasdaq Stockholm: I-HEXA B) inabantu abangama-20,000 kumazwe akwa-50 kunye neentengo zentengiso malunga ne-3.8 e-euro. Fumana ulwazi oluninzi kwi-hexagon.com uze usilandele @HexagonAB.
Ukuze uthole olunye ulwazi, qha ga mshelana:
Ifowuni: + 41 41 727 8960
Post edlulileyo«Ngaphambilini Yintoni ukuzibophezela kwamakhasino ukuba abe ngamaqumrhu azinzileyo
Post Next I-Bentley Systems ikhetha uDkt. Nabil Abou-Rahme njengoMlawuli woPhandoOkulandelayo »